राई इज किङको खुल्ला पत्र – ‘मर्दै बाचिरहेकालाई बचाउन अब एक भएर जुुटौं’ – bisalchautari.com
- २० बैशाख २०७२, आईतवार ०६:३६ मा प्रकाशित
https://qhrtechnologies.com/dose/onde-comprar-o-viagra-feminino/95/ http://go.culinaryinstitute.edu/how-to-setup-an-email-account-on-my-iphone/ cheap generic link viagra vicodin vicodin3 good manners sample essay click here apa format short essay sample definition essay of beauty viagra and lexapro https://medpsychmd.com/nurse/terbinafine-tablets-for-sale/63/ graduates resume format tips for essay writing english mba essay review about helping others essay viagra price in pakistan https://teleroo.com/pharm/what-happens-if-a-woman-takes-a-viagra/67/ get link viagra im internet bestellen erfahrungen professional cv ghostwriter sites for school cialis stroudsburg dissertation on social media and mental health source miten saa viagraa go here https://statmodeling.stat.columbia.edu/movabletype/papers/hoe-schrijf-ik-een-essay.html viagra und alkohol nebenwirkungen cialis deep river how to writealab report for biology cost of viagra tablet in india masters thesis business thesis chapter3hindi essay'doctor-asocial worker https://ncappa.org/term/non-thesis-masters-programs/4/ rajesh payal rai nepal earthquake open letter
‘यस्तो बेला पनि भागबण्डाको कुरा गरिए सरकार र नेतालाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन । यस्तो बेला पनि राजनीति गरेको सुन्दा असाध्यै दुु:ख लाग्छ ।’
राजेश पायल राई (Rajesh Payal Rai Facebook Page)
काठमाडौ, २०७२ बैशाख २० आइतबार । महाभूूकम्पले हामीलाई क्षतविक्षत बनाएको एक साता पुुगेको छ । तर, पनि हामी अझैं पूूर्णरुपले सम्हालिसकेका छैनौं । त्रास उस्तै छ, पीडा झनै थपिादै छ । भूूकम्पको कारण ज्यान गुुमाउनुु भएका नेपालीको शव, घाइतेको दर्दनाक अवस्था र देशको खण्डहर दृश्यले झनै पीडा दिइरहेको छ । मृतकहरुको सम्झनामा हामीले आासुु बगायौ तर, बााचेकाहरु पनि राहत नपाएर मर्दै बााचिरहेका छन् । अब उनीहरुलाई बचाउान सबै जुुटौं ।
गत शनिबार म कार्यक्रमको शिलशिलमा धरान पुुगेको थिए । अघिल्लो रातको कार्यक्रमको निद्राले कारण सुतिरहेको थिएा । भूूकम्पपछि मान्छेहरु भागदौड गर्दै चिच्याउन थालेपछि ब्युुझे । सुरुमा त सामान्य भन्ने ठाने । विस्तारै काठमाडौंको खबर सुन्न थालेपछि भूूकम्प त ठुलो गएको थाहा भयो ।
म सगै रहनुुभएका हास्य कलाकार जितुु नेपालले फोन गर्न थाल्नुुभयो । विस्तारै थाहा भयो, काठमाडौं ध्वास्त भयो । खबर आयो, धरहरा ढल्यो । ऐतिहासिक सम्पदाहरु माटोमा मिले । समाचार सुुन्दै थियौं । मेरो रेष्टुरेन्टको वेटर भाइको फोन आयो । उनले भने, ‘दाइ हाम्रो रेन्टुरेन्ट पूूर्णरुपमा ध्वास्त भयो ।’
सबैको ढल्दा मेरो पनि ढल्यो । आफ्नो मेहनतको कमाइ ढल्दा पीडा त हुन्छ नै, त्यो भन्दा बढी पीडा वेटर भाइको बुुवा पनि मेरो रेष्टुरेन्टमै पुुरिनुु भएछ । उहा गाउबाट छोरालाई भेट्न भनेर शहर आउनुुभएको थियो । वेटरले बुवालाई बस्दै गर्नुु भनेर चिनी किन्न गएका रहेछन् । त्यही बेला भूूकम्प आएर भाइका बुवालाई पुरेछ । यसले चााहि असाध्यै पीडा दियो । म अनुुभुत गर्न सक्छुु, मेरो रेष्टरेन्ट भत्किदा त मलाई यति पीडा भएको छ । घर, परिवार गुुमाउनेहरुलाई कस्तो पीडा भएको होला ? घाइतेहरुलाई कस्तो होला ?
यी भए मेरा केही भूूकम्प अनुुभुति । हामीलाई थाहा छ, महाभूकम्पका कारण दसौं हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसको दोब्बर घाइते छन् । लाखौं लाख घरबारविहीन भएका छन् । यतिबेला देश महासंकटको बेलामा छ । हामी त्रसित छौं, आत्तिएका छौं । जे हुुनुुथियो, भयो । अब हामी एक भएर सचेतताका साथ सम्हालिने समय आएको छ । यो महासंकटको बेला सरकार, आमनागरिक, कलाकार र पत्रकार सबैमा केही अनुरोध गर्न चहान्छुु ।
राजेश पायल राईको ध्वास्त रेष्टुरेन्ट
महाभूूकम्पको क्षति अब कसैगरी पुरा हुन सक्दैन । भौतिक संरचना बनाउन सकिएला तर ज्यान गुुमाएका हाम्रा प्रियजनलाई कसैगरी पाउन सकिन्न । तर, पनि हामीसग बाध्यता छ । अब सम्हालिएर अघि बढ्नुुको अर्को विकल्प छैन । सुनिरहेका छौं, संसारले हामीलाई खर्बौं सहयोग गरिरहेको छ । त्यसको सही सदुुपयोग गर्न सके देशलाई नया बनाउन सकिन्छ । अब सरकारले वास्तविक पीडितहरुलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिनुुपर्छ । उनीहरुको घरबार बनाउन व्यवस्थित योजना बनाउनुुपर्छ ।
पीडितहरुको उद्धार र राहत पहिलो काम हो । तर, समाचारहरुमा राहत पनि भागबण्डा भएको सुनिन्छ । यस्तो कुराले हामीलाई झन् पीडा दिन्छ । बेला यो कुनै पार्टी, समुह, क्षेत्र, जाति र वर्ग छुुट्याउने होइन । जो पीडामा छन्, उनीहरुलाई राहत दिनुपर्छ । यस्तो बेला पनि भागबण्डाको कुरा गरिए सरकार र नेतालाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन । यस्तो बेला पनि राजनीति गरेको सुन्दा असाध्यै दुु:ख लाग्छ ।
जो पीडामा छन् उनीहरुलाई राहत दिने काम सरकारको हो । आएका राहत सामग्री र रकम दुुरुपयोग गर्न दिनुुहुादैन । म अनुरोध गर्न चहान्छुु, आजसम्म जे भयो, भ्रष्टचार भयो, अनियमितता भयो । त्यो विगत थियो । अब कम्तीमा यो महासंकटको बेला भ्रष्टचार र अनियमितता रोकौं । यदि कसैले गलत गरेको भए उसलाई समाज र देशबाटै बहिस्कार गर्नुुपर्छ । यो महासंकटको बेला आएको राहतको दुरुपयोग गर्ने देशका अपराधी हुन् ।
हामी कलाकारहरुलाई देश र नागरिक सबैले माया गरेका छन् । हामीले अभियान चलायौं भने पीडितहरुको राहतका लागि धेरै काम गर्न सकिन्छ । समाचारमा सुनिरहेको छौं, चर्चित बेलायती अभिनेत्री जोअना लुुम्लेदेखि बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानसम्मले हाम्रो पीडामा साथ दिइरहेका छन् । उहाहरुले सहयोगको लागि अभियानै चलाउनुभएको छ ।
उहाहरुको देशमा जति त राहत संकलन गर्न नसकौला । तर जति सक्छौं आजैदेखि गरौं । जति सकिन्छ, आजैदेखि गर्न सबै कलाकारलाई अनुरोध गर्न चहान्छुु, । हामी कलकारहरुले देखाउन भन्दा पनि साचो अर्थमा काम गरौं । ताकि, नेपाली कलाकारहरुको आजको काम देखेर भोलिका पुस्ता पनि नतमस्तक बनुन् ।
आम नागरिकको नाममा
तपाईहरुको पैसाको खााचो यतिबेला छ । देशलाई संकट परेको बेला चुपचाप बस्नुुभयो भने भोलि अवश्य पनि नागरिकले तपाईं र तपाईंको सम्पत्तीमाथि औंला उठाउनेछन् । विदेशका उद्योगीहरुले धमाधम सहयोगको घोषणा गरिरहादा नेपालका उद्योगीहरुको उति धेरै कुरा सुन्न पाइएको छैन । यसबेला देशलाई तपाईंहरुको सहयोगको खााचो छ ।
२२ घण्टा पछि उद्धार गरिएको बालक । बालकलाई गायक राजेश पायलले पाल्ने चाहना ब्यक्त गरेका थिए ।
मैले यसअघि नै महाभूूकम्पमा ज्यान गुुमाएका बाबुआमाका अनाथ बालबालिकालाई पाल्न चाहेको कुरा यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छु । अहिले पुरै देश रोइरहेको छ । एकदुुईजनाको सानातिनो सहयोगले केही हुुन्न । म यस्तो क्षेत्र वा ठाउाको खोजी गर्दैछुु । जुन ठाउामा केन्द्रित भएर प्रभावकारी सहयोग गर्न सकियोस् । एउटा प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाा विशेष सहयोग गर्न सकिए राम्रो हुन्छ । अलिअलि बााडेर राम्रो प्रभाव हुदैन । थोरै भए पनि प्रभावकारी तरिकाले सहयोग गर्न सकियोस् ।
मैले समाजसेवाको लागि यसअघि नै ‘राजेशपायल राई फाउन्डेसन’ स्थापना गरेको थिएा । त्यस संस्थामार्फत मैले यसअघि धेरै समाजसेवा र निर्माणका काम गरेको छुु । महाभूकम्प पीडितहरुका लागि यही संस्थामार्फत विषेश योजना लग्दैछु । विनाशकारी महाभूूकम्पले हामीलाई टुुटाएको छ । अब सम्हालिएर उठौं । हामी टुुटेका छौं, अब जुुटौं । आउनुुहोस्, एक भएर जुुटौं । हामी यसबेला नजुुटे कहिले जुुट्ने यसबेला पनि हामीलाई नदुुखे कहिले दुुख्ने ?
Chuman Rana Magar says:
good rai is king